Internet Laser Chichatara Machine FOL-10/20/30/50 - China Dongguan Glorystar Laser
Fiber Laser Chichatara Machine FOL-10/20/30/50
Product Features Kukudzwa Laser hwapedyo uye inobereka mhepo yakakwana kutonhora Fiber Optical Laser rokuisa chiratidzo wemuTesitamende China. Hazvina kwezvakatipoteredza ushamwari, pasi rakawanda, zvizere kwaita uye vaitungamirira Laser gadziriro. Izvi rokusika Laser hurongwa anoita Manyiminya kutendeuka mwero kusvika 38% -50%. Mhepo kutonhora anogona kusangana hurongwa zvinodiwa. Ichi Laser kwava diki uye chiine kukura. Internet goho, anogona flexibly anoita 3D kugadzira hurongwa. The shure achiratidza isolator, iyo inoshandisa particularit ...
Kubwinya Laser hwapedyo uye pave kwakakwana mhepo kutonhora Fiber Optical Laser rokuisa chiratidzo wemuTesitamende China. Hazvina kwezvakatipoteredza ushamwari, pasi rakawanda, zvizere kwaita uye vaitungamirira Laser gadziriro. Izvi rokusika Laser hurongwa anoita Manyiminya kutendeuka mwero kusvika 38% -50%. Mhepo kutonhora anogona kusangana hurongwa zvinodiwa. Ichi Laser kwava diki uye chiine kukura. Internet goho, anogona flexibly anoita 3D kugadzira hurongwa. The shure achiratidza isolator, iyo inoshandisa particularity kuti wavelength uye inoenda Laser, uye mamiriro chaiwo mukati shure kuratidza isolator anogona kuvhara Laser zvinoratidzwa basa chidimbu kuti vadzivise Laser kupinda Laser oscillator zvakare kuparadza Laser oscillator.
Translucent mapurasitiki mabhatani, IC Chips, digitaalinen chigadzirwa zvinoriumba, zvakarurama michini, zvishongo, utsanana vazviziva, kuyera uye vakatema maturusi, varindi magirazi, midziyo yemagetsi, zvemagetsi zvinoriumba, Hardware nenhumbi, Hardware maturusi, mobile kukurukurirana zvinoriumba, motokari zvikamu, mapurasitiki zvigadzirwa, zvokurapa midziyo, zvokuvakisa, zvikwepa uye zvimwe mukuru-zvakarurama chigadzirwa chokuguma.
Nesimbi uye zvakasiyana-siyana asiri esimbi zvinhu, mukuru zvakaoma alloys, oxides, yakanamirwa pamifananidzo, unhani, ABS, epoxy nebwe, ingi, mapurasitiki, etc.
simba 10W / 20W / 30W / 50W
Beam mhando M2 <1.5
Output simba 10% ~ 100% (kuramba kuti kugadziridzwa)
Output maitikiro 20KHz ~ 100KHz (kuramba kuti kugadziridzwa)
(8h) Power kugadzikana (8h) <± 1% rms
Focus gwapa dhayamita <0.01 mm
enzanirana saizi 50X50mm 110mmX110mm 175mmX175mm
Carving udzamu 1.2mm
Carving havukavu 800 mureza vatambi / wechipiri
Minimum mutsetse upamhi 0.012mm
Minimum mutambi 0.15mm
akadzokorora kunyatsoita ± 0.003mm
System oparesheni WindowsXP / 2000/98
kutonhora muoti Air kutonhora
Tembiricha kushanda ezvinhu 15 ℃ ~ 35 ℃
Power kudiwa 220V / kuroorwa kutotanga / 50Hz / <400W
Upenyu Laser module 100000 til
Previous: 3D Dynamic Focus Series Laser Chichatara Machine GLD-100 / GLD-200 / GLD-350
Next: C02 Series Laser Chichatara Machine CMT-10/30/60/100
Laser Chichatara For Metal
Metal Laser Chichatara
On-Line Laser Chichatara Machine GLF-10 / 30c
C02 Series Laser Chichatara Machine CMT-10/30/60/100
GLF-10 / 30c On-Line Pumped Laser Chichatara Machine
3D Dynamic Focus Series Laser Chichatara Machine G ...